Ubuqiniso Nesiqinisekiso Sesevisi - Bukela i-Rapport
Ubuqiniso nensizakalo kuqinisekisiwe kuzo zonke izinyathelo zendlela.
Thenga iwashi lakho lamaphupho ngokuthula kwengqondo
Siyazivikela kumgunyathi nakuphindaphindwa.
Ochwepheshe bethu abazimele abahloliwe
fakazela ukuthenga kwakho,
ukuze ukwazi ukuthenga ngokuphelele
Ukufakazela ubuqiniso ngokuhlola
Ukulethwa okuphephile nge
Buka iRapport ihlanganisa zonke izindleko ze-
inqubo yokufakazela ubuqiniso
Ukuthula kwangempela kwengqondo, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni
I-Watch Rapport ikuthatha ngokungathi sína ukuthenga kwakho. Siyacwaninga, sibuyekeze, futhi siqinisekise uhlu ngalunye ukuvikela ekukhohlisweni. Abahloli bethu bewashi bangongoti futhi banolwazi lweminyaka engaphezu kwekhulu luhlangene.
I-Watch Rapport izokhipha isitifiketi sobuqiniso uma into esiyithola kumthengisi iyi-100% eyiqiniso. Uma unokungabaza ngokuthenga kwakho, kubuyisele emuva usebenzisa inqubo yethu yokubuyisa "yokuhlupheka mahhala" bese uthola imali egcwele. Ukuze ufunde kabanzi ngenqubomgomo yethu yokubuya chofoza lapha.
FUNDA NGOKUVIKELWA KWOMTHENGI
I-Watch Rapport ikholelwa ekusebenzeni kahle kwezinsizakalo. Silwela ukunikeza amakhasimende ethu ukwesekwa okusezingeni lomhlaba ngalinye. Sihlose ukuthenga okubushelelezi nokuphumelelayo.
Siyini isiQinisekiso Sobuqiniso bamawashi?
Buka isiQinisekiso Sokuqinisekisa seRipport yisevisi eyenzelwe ukusiza abathengi ukuthenga ngokuzethemba. Abaqinisekisi bethu abavela eceleni bahlola ngokomzimba zonke izinto ngaphambi kokuba zithunyelwe kumthengi.
Sisebenza kanjani isiQinisekiso Sobuqiniso?
Kulula! Phequlula futhi uthenge ukufakwa kuhlu kwe-Watch Rapport nebheji ye- "Authenticity Guarantee". Uma uthenga into, umthengisi uthumela leyo nto ngqo kumgunyazi wenkampani yangaphandle. Isiqinisekisi sizohlola kahle futhi siqinisekise ubuqiniso bento yakho ngaphambi kokuthi buthunyelwe kuwe ngokuphepha.
Ngabe ngizokhokhiswa imali ye-Authenticity Guarantee?
Cha. Ngosizo lwesiQinisekiso se-Authenticity, i-Watch Rapport ihlanganisa izindleko zokuqinisekisa, kanye nezinsuku ezimbili, zokuthumela okuvikelekile kusuka endaweni yokuqinisekisa evela kumuntu wesithathu iye kumthengi.
Ngabe amawashi wokuvuna afanelekile ukuthola isiqinisekiso se-Authenticity?
amawashi wevintage ayayifanelekela insiza Yokuqinisekiswa Kobuqiniso. Amawashi wevintage aqinisekiswa njengeqiniso nguzakwethu wokufakazela ubuqiniso obuvela eceleni angaqukatha izingxenye zokufaka esikhundleni ezingezona ezivela kumkhiqizi wangempela uma umenzi wokuqala engasenzi leyo ngxenye.
Amawashi wesikhathi wokuvuna namawashi amaningi asetshenzisiwe kungenzeka angabi ukumelana namanzi ezilinganisweni zawo zangempela. Sicela uthinte umenzi wamawashi ngaphambi kokubeka iwashi lakho emanzini. Amawashi wemishini abucayi kunezinye izinhlobo zamawashi. Qaphela ngaphambi kokwenza noma yimuphi umsebenzi ongahle uthuse iwashi.
Ngemuva kokuthi umlingani wokufakazela ubuqiniso beWatch Rapport athola iwashi, uzakwethu wokuqinisekisa uqala aqinisekise ngento nezinto ezisetshenziswayo ziyahambisana nesihloko sohlu, incazelo, nezithombe. Ngemuva kwalokho bazokwenza ukuhlolwa kwamaphuzu amaningi okuqinisekisa ngokomzimba. Ekugcineni, ithegi yokuphepha izonamathiselwa ewashini.
Amawashi avuthiwe amaningi asetshenzisiwe angadinga ukusetshenzwa ngumenzi wamawashi onolwazi ukuze abuyisele ukugcina isikhathi okunembile. Isiqinisekiso Sobuqiniso asinikezi iwaranti.
Ngubani ohlinzeka ngezinsizakalo zokuqinisekisa?
I-Watch Rapport isebenzisane nochwepheshe bemboni abahamba phambili izinsizakalo zabo namakhono abo ahlolwe kahle. Abalingani bokufakazela ubuqiniso bangabaholi embonini yabo, abanesipiliyoni seminyaka, abenzi bamawashi nabachwepheshe abaqinisekisiwe, besebenzisa imishini yezobuchwepheshe esezingeni eliphakeme esikhungweni sobuciko.
Inqubo yokuqinisekisa izothatha isikhathi esingakanani? Kuze kube nini ngithola into yami?
Ngemuva kokuthenga into yakho, umthengisi uyadingeka ukuthi athumele leyo nto kozakwethu benkampani yokuqinisekisa ye-Watch Rapport, ozocubungula into yakho zingakapheli izinsuku ezimbili zebhizinisi eyitholile. Inqubo yokuqinisekisa ubuqiniso nesikhathi esibekiwe kungahluka ngokuya ngento kanye nobunzima. Uma into iqinisekiswe ngempumelelo, into izothunyelwa kuwe mahhala ngokulethwa okuphephile kufaka phakathi isiqinisekiso sesiginesha.
Ngingakuthola ukupakisha kwangempela ngokuthenga kwami?
Yebo, uma umthengisi efake ukufakwa koqobo njengoba kuchaziwe ohlwini, zonke izingxenye zizothunyelwa kuwe.
Kuthiwani uma into ingaphumeleli ukuhlolwa?
Uma ubuqiniso bento bungeke buqinisekiswe noma isimo sento singahambisani nokufakwa kuhlu kwaso, sizobuyiselwa kumthengisi, futhi umthengi uzonikezwa imbuyiselo ephelele endleleni yakhe yokukhokha yangempela.